Ukuhlanza kwe-Ultrasonic kwe-Photo-Bioreactors - Hielscher Ultrasound Technology
Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic ye-Photo-Bioreactors
I-Microalgae ingatshalwa emachibini angajulile noma ama-photo-bioreactors. Ku-bioreactors, ifilimu ye-algae ivame ukukhula ngaphakathi kwe-reactor surface, ukuvimbela ukukhanya kwelanga nokuvimbela izithombeynthesis. Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic – isetshenziswa kusuka ngaphandle – ususa le filimu yama-algae ngokuphumelelayo.
I-microalgae ye-Photosynthetic isetshenziselwa izimboni ezihlose ukukhiqiza ukudla okunempilo, izithasiselo zokudla noma ama-biofertilizers. I-microalgae ingaba yindlela yokufaka i-CO2 kusuka emithonjeni yezimboni.
Isici esisodwa esibaluleke kakhulu ekunciphiseni umkhiqizo we-algae kulula. Ngakho-ke, i-bioreactors eqhubekayo ihlanganisa izitsha ezibonakalayo noma amathole, ezenziwe ngezici ezikhethekile zamaplastiki noma ingilazi. I-algae ephethe amanzi omswakama iqhuma kancane kancane ohlelweni, iveza wonke ama-algae endaweni ye-sun absorption. I-algae ikhula ngaphakathi kwendlela evaliwe. Lokhu kunciphisa ukuthi kungenzeka ukukhulelwa. Inani elilawulwa le-CO2 ijoyiwe ku-photo-bioreactor ukuze kwandiswe i-photosynthesis.
Le vidiyo ikhombisa ukuhlanzwa kwama-photo-bioreactors asetshenziselwa ukutshala iMicalalgae. Ukuhlanza i-Ultrasonic - kusetshenziswe ngaphandle - kususa ifilimu le-algae kahle.
ultrasonic isakhamuzi yokuhlanza
Ukuqhuma ezindaweni ezingaphakathi ze-bioreactors kuvimba ilanga – isici esibalulekile sokukhiqiza i-algae. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic asetshenziselwa indlela yombhalo ukuhlanza ingaphakathi lokubukeka kwezingilazi ze-glass reactor. I-sonotrode ye-ultrasonic icindezelwe ngokumelene nomnyango wangaphandle. Lezi zimbhangqwana ze-ultrasonic ingilazi, eziholela ekudlideni kweglasi ngokwayo. Lokhu kususa ukuxubha kusuka ebusweni obungaphakathi. I-algae evulekile igxiliwe futhi i-sun ikwazi ukufinyelela ngaphakathi kwe-reactor. Ukuze uhlanze ama-tubes amaningi amade, isimiso esisodwa se-ultrasonic singasuswa ku-tube ngayinye futhi sisuka ku-tube kuya tube.
Izinqubo eziningi ze-Ultrasonic ze-Algae
I-Algae iphinde ibe nesithakazelo se-feedstock esimeme sokukhiqiza kwe-biodiesel. I-Ultrasonication ithuthukisa ukukhipha amafutha avela kumaseli algae futhi i ukuguqulwa ku-biodiesel.
Sincoma ukuhlolwa kwesilinganiso sokuhlola isib. Ukusebenzisa uhlelo olukhethekile lwe-UIP500hd. Lokhu kuzobonisa imiphumela ejwayelekile kanye nokuthuthukiswa kwe-reactor yakho ethile. Yonke imiphumela ingafakwa. Sizojabula ukuxoxa ngezidingo zakho nawe futhi sincoma izinyathelo ezengeziwe.
Cela ulwazi oluthe xaxa!
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi olwengeziwe mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasound ukuhlanza ama-photo-bioreactors.
Ifoni & I-Cable Cleaner
I-wire kanye ne-cable yokuhlanza uhlelo lokususa amafutha, insipho noma uthuli.
I-UIP1000 – I-Sonication Setha
1,000 watts isethi ultrasonic ngenqubo R&D nokusebenza kahle
Funda kabanzi mayelana nezinhlelo zamakhemikhali zamadivayisi wethu we-ultrasonic!
Ama-Biorefineries asebenzayo nge-Ultrasonic Process Intensification
Extraction Ultrasonic of Spirulina Pigments